Waa kee ciyaaryahanka ku sugan Kooxda Chelsea oo ay doonayaan Hazard iyo Courtois inay markale kula midoobaan Real Madrid? – Gool FM
(Madrid) 12 Sebt 2019. Xiddigaha Eden Hazard iyo Thibaut Courtois ayaa waxay ku wargaliyeen qaar ka mid ah asxaabtooda, in saaxiibkood hore kooxda Chelsea ee N’Golo Kanté uu yahay ciyaaryhanka ay Real Madrid sida aadka ah ugu baahan tahay.
Zinedine Zidane ayaa dusha kala socday dib-u-dhiska kooxda Real Madrid ee suuqii xagaaga, taasoo lagu arkay in Los Blancos ay sameysay saxiixyada, Eden Hazard, Luka Jovic, Éder Militão iyo Ferland Mendy, waxaana ku baxday in ka badan 300 milyan ginni.
Suuqii xagaaga oo dhan Zidane wuxuu isku dayay inuu helo adeega xiddiga Manchester United ee Paul Pogba, halka madaxweynaha kooxda uu indhaha ku hayey xiddigaha kooxda Paris St Germaine ee Kylian Mbappé iyo Neymar Jr.
Wargeyska “Mitro” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in xiddigaha Eden Hazard iyo Thibaut Courtois ay u xaqiijiyeen asxaabtooda mar ay la hadlayeen, inay fiicnaan laheyd in macalinka kooxda Real Madrid uu mudnaanta koowaad siiyo N’Golo Kanté.
Zidane ayaa weli si weyn ugu tiirsan seddexda ciyaaryahan qadka dhexe ee Toni Kroos, Luka Modric iyo Casemiro, kuwaasoo Real Madrid ku hogaamiyay ku guuleysiga Champions League saddex jeer ee xiriir ah.
Si kastaba ha noqotee, saxiixa 28-sano jirka reer France ayaa aheyn arrin fudud maadaama Kanté qandaraaska uu ku joogo Chelsea uu kaga dhiman yahay mudo aad u dheer, wuxuuna toddobaad walba mushaar ahaan u qaataa £ 290,000.